mercredi, 10 août 2016 11:33
Ampanihy Andrefana : Mpivaro-mandeha voatafika, lasan’ ny dahalo ny vola 7 tapitrisa ariary
Tsy nisy rà latsaka na aina nafoy tamin’ity fanafihana ity. Misokatra ny fanadihadiana ary karohina ireo olon-dratsy. Mpivaro-mandeha telo mianadahy no voatafika, tany Ampanihy Andrefana, ka lasan’ny mpandroba tamin’izany ny lelavola fito tapitrisa ariary niampy entam-barotra maromaro zakan’ireo dahalo.
mercredi, 10 août 2016 11:18
Toliara : Sokatra miisa 1 500 mahery sarona
Nirongatra ny trafikana sokatra tato ho ato ary raha ny fanomezam-baovao avy amin’ny sampan-draharahan’ny Rano sy Ala Atsimo Andrefana dia maherin’ny 1 500 no tra-tehaka tao anatin’ny roa volana latsaka kely monja. Zana-tsokatra miisa 310 saika haondrana an-tsokotsoko indray no tra-tehaky ny polisy tany Ampanihy Andrefana, ny faran’ny herinandro teo. Fiarabe taksiborosy mampitohy an’i Tolagnaro sy Toliara no nitondrana an’ireto sokatra avy any Beloha Androy ireto izay nafatratra tao anaty valizy maromaro.
mercredi, 10 août 2016 10:11
Détournement de 218 millions d’Ariary : Un Évêque anglican devant la barre
Du jamais vu dans l’histoire de l’Eglise anglicane à Madagascar, qu’un Evêque soit poursuivi pour détournement de denier du culte dans les paroisses dont il avait la charge, qui s’élève à 218 millions d’Ariary, entre 1999 et 2011. L’affaire est déjà passée devant le tribunal ecclésiastique de l’Eglise anglicane en 2011, incriminant Mgr Solo Jean Paul et deux trésoriers de l’Eglise à Toamasina. L’Evêque comme ses plaignants, des presbytériens, ont été suspendus de 18 mois de leur fonction.
mercredi, 10 août 2016 09:17
EPP Andamoty Sambava : Notoloran’ny Mpanjaka Andriamanjakarivo Said fanampiana
Tonga nitsidika ny sekoly EPP Andamoty Sambava ny Mpanjaka Andriamanjakarivo Said omaly talata maraina. Tamin’izany no nilazany fa tena resabe teto Sambava ny haratsian’ny voka-panadinana BEPC izay tsy nisy raha tsy 10,45 % fotsiny. Ndao hokolokoloina hatramin’ny fahakeliny ny zaza raha te hahazo vokatra tsara isika, ka izay no antony nahatonga ahy nitondra izay hita kely toy ny solaitra omena ny ankizy mpianatra rehetra amin’ity EPP Andamoty ity hoy izy. Eo koa ny solatraiba be ho an'ny sekoly, kahie, pensily hazo, tsaoka, ary vatomamamy.
lundi, 08 août 2016 10:52
JIRAMA : Miakatra be ny faktiora
Lanja-miakatra tokoa ity fiainana ity, fa dia hita niakatra avo roa heny amin’ny fandaniana amin’ny ankapobeny ny vidin’ny Jiro sy Rano amin’izao. Tsy fantatra mazava ny anton’izy io ka miteraka fifamaliana eo anivon’ny fiaraha-monina, indrindra ireo mpanofa sy ny tompon-trano. Mitaraina ihany koa ireo mpiasa izay mampiasa herinaratra satria tsy vitan’ny fiakaran’ny vidin-jiro fotsiny fa mbola eo ihany koa ny fahatapahana matetika mandritry andro hiasana. Mbola miverina hatrany izany ny delestazy.
vendredi, 05 août 2016 15:55
Razafisoa Jeanne : Mpiadina bakalôrea zokiny indrindra taty SAVA
Renim-pianakaviana iray antsoina hoe Razafisoa Jeanne, no zokiny indrindra amin’ireo mpiadina bakalôrea tamin’ity taona ity. 73 taona izy, « série A2 » amin’ny sokajy ankapobeny izy miadina ao amin'ny CEG Sambava, ka efitrano faha- 9 no nisy azy. Araka ny fijoroana vavolombelona nataony dia ankafiziny ny mianatra tsy manam-pahataperana, nefa ny mampanahirana azy kely amin'izao dia eo amin'ny maso ka tsy maintsy manao solomaso vao mahita tsara rehefa manoratra.
Minisitra Anandra Norbert
vendredi, 05 août 2016 13:35
Minisitra Anandra Norbert : Hentitra ary tsy misangy amin’ireo polisy mioha-pefy
“ Izay polisy rehetra manao ny tsy mety dia tsy maintsy iharan’ny lalàna avokoa, satria tany tan-dalàna isika “, izay no navoitry ny minisitry ny filaminam-bahoaka, Anandra Norbert, nandritra ny tafa manokana nifanaovanay taminy ny alarobia teo, raha nanontaniana ny tenany mahakasika ny raharaha nahavoarohirohy polisy mpiana-draharaha iray voasambotry ny zandary voasaringotra tamin’ny fanafihana mitam-basy teny Andoharanofotsy.
jeudi, 04 août 2016 14:35
Toliara : Tovolahy mpibata entana matin’ny toaka
Tovolahy iray 27 taona mpibata entana no matin’ny toaka, ny talata naraina, tany Toliara. Reraka be saingy mbola nisy aina izy no hitan’ny havany ka nampisotroana ranom-bary mafana, kanefa vao nitelina izany ity tovolahy ity dia niaka-boamaso sy niala aina ary namoy ny ainy teo ihany. Avy dia nikoropaka ny rehetra tao an-trano tsy nanampo ny loza nitranga satria tsy afaka nialana nenina intsony izy.
jeudi, 04 août 2016 14:15
Balances et instruments de mesures : Vérifications 2016 en cours
Les instruments de mesure réglementés doivent subir la vérification périodique du Ministère du Commerce et de la Consommation à travers le Service de la Métrologie Légale (SML), en application du Décret 93 360 du 07 Juillet 1993 portant réglementation du contrôle de métrologie légale.
jeudi, 04 août 2016 13:03
Fianarantsoa : Amboarina ny lalana
Tanterahina mandritra ny roa volana ny asa fanarenana ny ampahan-dàlana Ambalapaiso Ambony sy Ambany eto Fianarantsoa. Nanomboka ity andron’ny alakamisy ity ny asa iarahan’ny Kaominina amin’ny sampandraharahan’ny Asa vaventy sy ny orinasa Tantely. RPI na Ressources Propres Internes avy any amin’ny Ministeran’ny Asa Vaventy izay namaly ny fangatahan’ny Kaominina no famatsiam-bola nahazoana ny asa fanarenana. Sokajin’asa roa no ho tanterahina ka fanamafisana ny lalana rarivato mirefy zato metatra miakatra an’Ambalapaiso Ambony ny voalohany.